समाजवादी शिक्षा हाम्रो यात्रा  OnlineKhabar
समाजवादी शिक्षा हाम्रो यात्रा
संविधानको प्रस्थापनामा नेपाली समाजको यात्रा समाजवादी यात्रा हुनेछ भनेर लेखिएपछि अबको हाम्रो यात्रा समाजवादी यात्रा हुने कुरामा कुनै दुविधा रहेन । जुन कुरा राणहरुको विरुद्ध संघर्ष गर्दै नेपालमा राजनीतिक पार्टी स्थापना गर्दा पुष्पलाल र वी.पी. कोइरालाले देखेको सपना थियो । र, यो माओवादी जनयुद्धको उपलव्धी थियो ।
अब नेपाली जनताका लागि समाजवाद कार्यान्वयनको दायित्व बनेर आयो । शिक्षा र राजनीति एक अर्काका पुरक विषय हुन र सँगसँगै हिड्दा मात्र समाजको मुहार फेरिने हुँदा राजनीतिक उपलव्धीहरुलाई समाजमा प्रतिविम्वित गर्न विद्यार्थी आन्दोलनको नयाँ परिभाषा खोज्दै समाजवादी शिक्षाको कार्यदिशा निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
समाजवाद राजनीति कार्यक्रम नभएर समतामूलक सामाजिक व्यवस्था हो । माक्र्स एङ्गेल्सको शब्दमा योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दामको व्यवस्था गरिएको सामाजिक व्यवस्था हो । जहाँ मानिसका आधारभूत आवश्यकताहरु सजिलै पूरा हुन्छन् ।
समाजवादलाई आजभोलिको क्याटरिङ्ग, पिक्निक नभई पुरानो पिकनिक समाजको रुपमा पनि वुझन सकिन्छ । जहाँ क्षमता अनुसारको सरसामानको व्यवस्था, स्वेच्छिक र रुची अनुसारको कार्य विभाजन, तीतो मीठो कुनैमा गुनासो नहुने, खुशी र उल्लासका साथ मनाइने गरिन्छ । त्यहि पिक्नीक समाज हो समाजवाद ।
समाजवादी शिक्षा समाजवादी व्यवस्थाका लागि योग्य मानिस निर्माण गर्ने प्रकृयागत प्रणाली हो । समाजवादी व्यवस्था वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण गर्ने व्यवस्था नभएर संस्कृति र चेतनाको विषय पनि हो । यसर्थ समाजवादी शिक्षा निर्माणमा देशको माटो, संस्कृति र राजनीतिको संयोजन हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
समाजवादी व्यवस्था मानिसका आधारभूत आवश्यकता सजिलै पुराहुने व्यवस्था भएकोले राज्यमा प्रर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुनु अनिवार्य हुनेछ । यसर्थ शिक्षा उत्पादनसँग जोडिनु समाजवादी शिक्षाको पहिलो विशेषता हुन्छ । हाम्रो देशमा पहिलो शिक्षा दिक्षा दिने अनि त्यसको योग्यता अनुसार कामको खोजी गर्ने, पहिला तालिम दिने त्यसपछि रोजगार खोजिदिने गलत प्रचलन छ । यसलाई फेर्न जरुरी छ । पहिला देशलाई कस्ता मान्छे ? कति मान्छे आवश्यकता हो ? त्यसको आधारमा शिप र शैक्षिक संस्थाहरुको निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ देशको अर्थतन्त्र विकास गर्दै समृद्धिको यात्रामा हिडन कति मानिसहरु आवश्यकता छन र त्यो कहाँ र कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
समाजवादी शिक्षाको अर्को विशेषता संस्कृति र चेतनाको सवाल हो । नेपालमा आर्थिक हैसियतका आधारमा विद्यार्थीहरुलाई पठनपाठन गराउने शैक्षिक संस्था र शैक्षिक नीति छ । जसको कारण फरक फरक मनोविज्ञान, फरक दृष्टिकोण र फरक वुझाई भएका मानिसहरु निर्माण भइरहेका छन । यो समाजवादी व्यवस्थाका लागि घातक कुरा हो । यसका लागि नेपालका समाजवादी विद्यार्थी संगठनहरुले नीजि स्कूलमा शुल्क घटाउ र सार्वजनिक स्कूलको स्तर उठाउ भन्ने नारा दिएर संघर्ष गर्दैमा पुग्दैन । शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउने राज्यको नीतिका विरुद्ध संघर्ष गर्दै नीति बदल्न र शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिने गरी आँधीवेहरी सिर्जना गर्न जरुरी छ । यो २१ औं राष्ट्रिय सम्मेलनको अर्को शंखघोष हुनेछ ।
कुनै बेला मानिसहरु मानवीय जीवनका आवश्यकताहरु प्रकृतिमा घुम्दै जंगली आहारविहारबाटै पूरा गरे । पछि मानिसहरु बलियोले कमजोरलाई दास वनाएर आफ्ना आवश्यकताहरु पूरा गरे त्यसभन्दा पनि पछि जमिनका उत्पादनबाट आफ्ना आवश्यकताहरु पुरा गरे त्यसपछि मानिसहरु पैसा मार्फत आफ्ना जीवनका आवश्यकताहरु पुरा गरिरहेका छन । मानिस निरन्तर जीवनको सुखको खोजीमा छ । यो प्रकृयामा यी सबैकुरा आविस्कारहरु भए । फेरि यी सबै कुराहरु हुन्, मानिसका सुखका खोजीमा निस्केका अन्तिम आविश्का थिएनन र होइनन ।
मानिसहरु आज पनि सुखको खोजीमा विज्ञान र प्रविधि मार्फत नयाँ नयाँ आविष्कारहरुमा लागि रहेका छन । मानिसहरु वच्चा पेटमा होइन टेष्टटूवमा खोजिरहेका छन् । खाना खेतमा होइन, मेशिनमा खोजिरहेका छन । कपडा सनपाटमा होइन रासायनिक संयोजनमा खोजिरहेका छन् । विद्यार्थीहरु के कुरा नयाँ भनेर पढिरहेका छन् त्यो सबैकुरा पढाई नसिध्याउँदै पुराना भएका छन् । यसको मतलव विज्ञानका हरेक शाखाहरुमा भैरहेका आविष्कारहरु समाजवादी शिक्षाको अनिवार्य पक्ष वन्न जरुरी छ भने समाजवादी शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु अन्वेषक हुन जरुरी छ ।
समाजवादी शिक्षा निर्माणको यात्रामा कार्यदिशा निर्माण गर्दैगर्दा फिनल्याण्ड, क्यूवा, चीनको साघाई लगायतको ठाउँको शिक्षा हाम्रा लागि महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामाग्री हुन सक्छन् । फिनल्याण्डको शिक्षा ओल्ड इकोनोमी फोरमले गर्ने सर्वेक्षण अनुसार यो वर्षको विश्वको सवैभन्दा उत्कृष्ट शिक्षामा पर्दछ । जहाँ सवै शिक्षा निशुल्क र मातृभाषामा दिने व्यवस्था छ ।
डिग्री पास गरिसकेपछि अनुसन्धानमा लागेका मानिसहरुलाई शिक्षण पेशामा प्रवेश गराइन्छ र देशको सवैभन्दा उच्च प्रोफेशन शिक्षा हो । त्यसपछि मात्र अन्य प्रोफेसन डाक्टर, इन्जिनियर लगायत पर्दछन । सवै वर्ग, लिंग, धर्म, उमेरका मानिसहरु एउटै क्लासमा राखेर अध्ययन गराइन्छ यदि कुनै विद्यार्थी भर्ना भएपछि अध्ययन पुरा गर्न सकेन भने विद्यार्थीलाई होइन शिक्षा प्रणालीलाई दोषी ठानिन्छ ।
करिव दशभन्दा धेरै विद्यार्थी संगठन र सयौंको संख्यामा अन्य विद्यार्थी संगठनमा क्रियाशिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी नेताहरुको ध्रुवीकरण पश्चात अखिल क्रान्तिकारी २१ औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ । यो सम्मेलनपछि शिक्षाभित्रका सवै विकृति, विसंगति र सांगठानिक जीवनका सवै विकृति र विसंगति अन्त्य गर्दै समाजवादी शिक्षाको यात्रामा निस्कने छ । यो नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको नयाँ यात्रा हुनेछ । यो यात्राबाट देशका सवै विद्यार्थीहरुलाई राता मान्छे र सवै राता मान्छेहरुलाई एक्सपोर्ट मान्छे वनाउन संकल्प गर्दै सोही अनुसारको नीति निर्माण र कार्यक्रमहरु निर्माण गरिनेछ ।
अखिल क्रान्तिकारीले यही भदौ ७ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा एकताको २१ औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ । उक्त सम्मेलनमा अबको नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको समाजवादी यात्राका विषयमा गम्भीर बहस र छलफल हुनेछ ।
(केसी अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)
२०७४ साउन २६ गते १५:२९ मा प्रकाशित
ganga sunuwar लेख्नुहुन्छ | २०७४ साउन २७ गते ९:५३
yo 100% thik lagyo nepalma utpadanko sampurna pra.li. ma darta garai simit manis, sasthan
wa compani dhani banaune rajya kamjor banai rajniti aasthirta lyaune ra pujibadiharuko akhada banai garibiharuko karkhana nepalilai banaune pujibadiharuko utkrista yojana.